Eoropa Andrefana · Jolay, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Eoropa Andrefana · Jolay, 2018
Tantara mikasika ny Eoropa Andrefana tamin'ny Jolay, 2018
Amerika Avaratra 31 Jolay 2018
Na dia nilamindamina aza ny ahiahy momba ny firongatry ny "gripan-kisoa" dia mbola nitohy ny fiparitahan'ny viriosy nanerana izao tontolo izao . Nanambara ny OMS fa olona miisa 4 379 no tratran'ity virosy ity (2009) tany amin'ny firenena miisa 29. Ireto ny sary vitsivitsy mampiseho ny fiantraikan'ny gripan-kisoa manerantany.
Inona no nanjo ny zo niomerika nandritra ny fito taona lasa? Hilaza izany aminao ny andiany faha-300 amin'ny Tatitry ny Olon-tsotra Mpampiasa Aterineto
Bahrain 31 Jolay 2018
Amin'ity herinandro ity, miverina mijery ireo fito taona nandrakofana ny vaovao maneran-tany momba ny zo niomerika ho fankalazana ny andiany faha-300 nosaratanay izahay!
Serbia: “Tononkalo alahelo ho an'ny kisoa iray”
Eoropa Afovoany & Atsinanana 31 Jolay 2018
Marobe ireo Serba zatra mankalaza ny Krismasy Ortodoksa amin'ny alalan'ny fanapoahana basy sy basy poleta, ary misotro rano voajanahary miloko sy mihinana kisoa.
Hanery amin'ny hanaovan'i Frantsa ny resaka ilaina momba an'i Afrika ve ny hanihanin'ny Mondialy?
Afrika Mainty 29 Jolay 2018
"Amin'ny fiantsona azy ireny ho Afrikana dia tahaka ny mitsipaka ny maha-Frantsay azy ianao."
Amerika Avaratra 27 Jolay 2018
Nanoratra lahatsoratra fohy izay nampifandraisany ireo trangan-javatra farany niseho tao Ejipta i Grey wool Knickers, sady niezaka ny hampifandray azy ireo amin'ilay fanafihana nitranga
Italia, Tonizia: Tenina Mpifindra Monina Mikasika ny Lohataona Arabo
Ejipta 22 Jolay 2018
Inona no hevitr'ireo mpifindra monina mipetraka ao Italia momba ny hetsika vao haingana tao Afrika Avaratra? Inona no hetvit'izy ireo mahakasika ny anjara asan'ny Aterineto? Ny fijoroana vavolombelon'izy ireo dia nangonina tao anatina lahatsary fanadihadiana izay nalefa mandritra ny Fihaonana ''Tonizia, ny vanim-potoanan'ny jasmina'', nandritra ny fetin'ny sarimihetsika Immaginafrica, ny 14 novambra 2011 tao Padoue.
Bilaogeran-dahatsary manerantany nifaninana hahazo ny BOBs (fizarana 2)
Amerika Latina 14 Jolay 2018
Nitsidika ireo bilaogin-dahatsary avy amin'ny sasantsasany tamin'ireo voafantina hifaninana BOBs, ilay lokan'ny Bilaogy Tsara Indrindra (Best of Blogs) nokarakarain'ny Deutsche Welle isika tao amin'ny lahatsoratra teo aloha. Ho hitantsika ato hoe iza ireo bilaogeran-dahatsary hafa manerana izao tontolo izao no voafantina !
Bilaogeran-dahatsary manerantany nifaninana hahazo ny BOBs (fizarana I)
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 12 Jolay 2018
Nisafidy mpifaninana miisa 176 amin'ny sokajy 16 ny BOBs tamin'ny fifaninanana isan-taona izay nokarakarain'ny Deutsche Welle ho an'ny famokarana amin'ny aterineto. Ao amin'ny sokajy famahanana bilaogin-dahatsary, nifaninana hisalotra ny ho tsara indrindra ao amin'ny vondrona misy azy ireo mpandray anjara avy amin'ny faritra samihafa.